တရုတ် Solenoid Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Aokai
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Solenoid Valve များ
Solenoid Valve များ ထုတ်လုပ်သူများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် Solenoid Valve အတွက် ၁၆ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်အလက်များအားကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ၊ သင့်အတွက်မှန်ကန်သောအဆို့ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့နမူနာတွေကိုငါတို့ဆီပို့နိုင်တယ်၊ ငါတို့မင်းအတွက်ကော်ပီကူးနိုင်တယ်။
Solenoid Valve အရွယ်အစားများ။
Solenoid Valve Orifice ဆိုတာဘာလဲ။
Solenoid Valve Normal Close သို့မဟုတ် Normal Open?
Solenoid Valve Working Pressure ဆိုတာဘာလဲ။
Solenoid Valve အလုပ်လုပ်ချိန်အပူချိန်?
Solenoid Valve ဗို့အား?
ဒါဆိုရင် Solenoid Valve ကိုငါတို့ကိုးကားလိမ့်မယ်။
1: 2- ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားသော pneumatic valve solenoid valve, de-energized ဖြစ်သည့်အခါ၊ အားပြည့်သောအခါဖွင့်သည်။
2: Serialized Solenoid Valve၊ အရွယ်အစားသေးငယ်၊ ကြီးသောနှုန်း၊ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်
၃: Pneumatic valve Body material: ကြေးဝါသွန်းထားသောကြေးဝါ (၃၂၊ ၄၀၊ ၅၀ အတွက်သာ)
4: ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ၀ -၁၂၀
5: မြှားကဲ့သို့စီးဆင်းပါ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတက်ပါ။ အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်သည်
6: ဗို့အား: 220VAC/230VAC/240VAC/110VAC/24VAC 50/60Hz 24VDC/12VDC;
၇: Collcan သည်ဂျာမနီ Nass Coil ကို Î¦ ၁၆ မှ ၂၅ မီလီမီတာအောက်တွင်သာရှိသည်
8: ဤ pneumatic အဆို့ရှင်များကို Seais နှင့် diaphragm များအတွက် Seais နှင့် diaphragm များအတွက် Seym နှင့် diaphragm တို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအရည်များကိုအပိတ်ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို Solenoid Valve ကိုရွေးချယ်သနည်း။
(၁) Solenoid Valve Quality၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းအဆင့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုသာထုတ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၏ကုန်ကြမ်းအားလုံးသည်ပထမတန်းစား၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောစနစ်ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုကတိပြုသည်။
(၂) Solenoid Valve စျေးနှုန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒသည် "Win-to-Win" ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ကူညီရန်သေးငယ်သည့်အမြတ်ကိုသာယူသည်။
(၃) ပေးပို့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကုန်ပစ္စည်းအချို့အမြဲရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းပို့ဆောင်မှုကိုအပြီးသတ်နိုင်သည်။
(၄) Solenoid Valve No MOQ၊ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ယာယီကြီးကြီးမားမားတောင်းဆိုမှုမရှိသူအချို့အတွက်ဒါဟာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။
ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုမီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးမီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့သုံးကိရိယာများအတွက်သင့်တော်သောလုံခြုံစိတ်ချရမှုဖွဲ့စည်းပုံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အရည်ပျော်ရေနံဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးတု
Safety Device အတွက် Gas Magnet Valve
လုံခြုံစိတ်ချရသောစက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ငွေ့သံလိုက်အဆို့ရှင်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရောင်းချခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ သြစတေးလျတို့မှ ၀ ယ်သူများသည်ကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
Flame Failure Device အတွက် Gas Magnet Valve
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် thermocouple နှင့်ဓာတ်ငွေ့သံလိုက်ယူနစ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သည်။ Thermocouple နှင့်ဓာတ်ငွေ့သံလိုက်ယူနစ်သည်ကျယ်ပြန့်သောဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖို၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စွာသုံးသော flameout safety protector ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးတောက်ချို့ယွင်းမှုအတွက်ဓာတ်ငွေ့သံလိုက်အဆို့ရှင်ကိုပေးလိုပါသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ကမင်းကိုအကောင်းဆုံး after-sale service နဲ့အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။
မျှော်လင့်မထားသောအကြောင်းများကြောင့်လျှံထွက်သောအခါ thermocouple သည်အလားအလာလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးသည်၊ သံလိုက်အဆို့ရှင်သည်နွေ ဦး ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်၌စုပ်ယူမှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်၊ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်မှုကဏ္ play ကိုကစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ solenoid သံလိုက်အဆို့ရှင်ကို ၀ ယ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ဖောက်သည်များထံမှတောင်းဆိုချက်တိုင်းကို ၂၄ နာရီအတွင်းအဖြေပြန်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Magnet Valve ကိုကျယ်ပြန့်သောစီးရီးများပံ့ပိုးပေးရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတည်ဆောက်ပုံသံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ကိုနိုင်ငံ ၃၀ ကျော်သို့ခိုင်မာသောနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အရည်အသွေးကောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်တင်ပို့ခဲ့ပါသည်။
Electromagnetic Valves များ
ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုအတွက်သံလိုက်အဆို့ရှင်၊ thermocouple အဆို့ရှင်၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောကိရိယာ၊ မီးတောက်ချို့ယွင်းသည့်ကိရိယာအရွယ်အစားသည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့အရည်အသွေး၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှုကိုခံစားပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
Aokai သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိပညာရှင် Solenoid Valve များ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE ထောက်ခံချက်ရရှိထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့နမူနာကိုလည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်အကြမ်းခံသောထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မင်းငါတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ သင်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါ။ အလွှာပေါင်းစုံမှမိတ်ဆွေများလာရောက်လေ့လာရန်၊ လမ်းညွှန်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရန်လာရောက်ပါ။